The Holy Land of Vietnam Nam Daraasaadka - HADA QADADA - Dhulka Quduuska ah ee Daraasadaha Vietnam
2935 Views Prof. Assoc. HUNG NGUYEN MANH
Magaca SHURUUDAHA Quduuska ah ee waxbarista VIET NAM Waxay ka timaadaa shucuur cilmi baarayaal badan oo ah Daraasadaha Vietnam kuwaas oo ku nool Vietnam iyo dalal shisheeye.
Gudigayada buugaagta ee sameynta ayaa loo oggol yahay inay dejiso degel leh magaca Dhulka barakaysan ee Daraasadaha Vietnam - thanhdiavietnamhoc.com halkaasoo ay jiraan tabarucaad badan oo xubnahooda ka imanaya sida ku cad tilmaamaha Kuxigeenka Professor, Dr. Nguyen Manh Hung.
2.1 Dhulka barakaysan
Dhulka barakaysan, dhul loo aqoonsaday qiyamka la taaban karo, dhaqanka lama-taabtaan ah casriga ah habka odhanaya ama dhaqanka waxyaalaha, ruuxa hab dhaqan ahaan odhaahda kaas oo ay dhiseen oo sii qotonsadeen awowayaasheen iyada oo loo marayo geedi socodka taariikhda oo ku saleysan qaybo ka mid ah fikradaha caqliga ee bulshada Fiyatnaamiis. Macnaha guud ee qoraalka fikradaha dastuurka u rogeen dagaalka dhaqameed iyo kuwa aan dhaqan ahayn si loo dhiirrigeliyo taariikhda.
2.2 Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Fiitnaam - Sawir taariikhi ah
Tan iyo gumaystayaashii Faransiiska waxay ka duqeeyeen dekeda Danang 1858 waxayna qabsadeen Cochinchina waxayna u isticmaaleen gumeysi si ay u helaan "silsiladda cuntada”Far - Orient Aasiya ilaa meeshii Napoleon uu tilmaamay. Tani waxay ahayd qaab lagu tuso kooxaha “Codsi” ama loogu yeedhay “ganacsato"- qayb ka mid ah kooxda dhaqaalaha Faransiiska.
Sida lagu cadeeyay macnaha Vietnamese, dalka barakaysan ee Vietnam Waxay dhakhso u bedeshay warshad akadeemiyadeed oo la yiraahdo Vietnam oo leh shabakad faafisa dalal badan iyo dhulal badan oo adduunka ah. Waagii hore, Shabakadda Waxbarshada Nam Nam Waxaa loo tixgeliyaa Yurub, gaar ahaan Faransiiska, Japan, Shiinaha iyo Mareykanka ee Mareykanka inay yihiin meelo ay ku tabaruceen taariikhda Vietnamese sida caadiga ah oo loo qoro. Caadi ahaan, waxay ahayd urur Euro-Vietnam.
Iyada oo loo marayo seminaaro badan oo gudaha ah, hal weedh ah Daraasadaha Nam Nam waxaa loo tixgaliyay inay tahay warshado tacliimeed oo daboolaya wax la taaban karo, qiimayaal aan la fahmi karin oo umadda Fiyatnaamiis la aqbalay.
Waxaa jiray dood-cilmiyeed caalami ah Daraasadaha Vietnam Nam Vietnam gudaheeda 1988 kaas oo sameeyay Euro-Vietnam waxaa loo aqoonsaday inay tahay warshado tacliimeed oo jihaynaya dalka hooyo. Waxay ahayd meesha ay ku abuurtay dadka leh dhaqan dhaqan aan lagu darin markay la taagan yihiin isla warshadaha, haddii aysan dhalaalin, tusaale ahaan, Japan waxay daraaseysaa daraasadaha Korea, daraasadaha Koonfur-bari Aasiya.
Ka sokow Fiyatnaamkan waxay gacan ka geysteen qaar ka mid ah dhaqamada waaweyn sida Barashada Shiinaha, Daraasadaha India, Maraykanka. daraasadaha ama daraasadaha Orient, Daraasadaha Asia Aasiya...
2.3 Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Vietnam - Dev Vietnamlopment, Integration, Kala-guurka dhaqanka iyo casriga
Ku soo laabashada 1998, Daraasadaha Vietnam Nam waxaa loo aqoonsaday "cinwaanka barashada". Marka loo eego tirakoobka, waxaa jiray 27 dal iyo 300 aqoonyahanno caalami ah oo la sharfay Daraasadaha Vietnam Nam kuwaas oo ku iftiimiyay madal.
Maalmaha Shirweynahaas Mawduuca “Baadhista Vietnam Nam iyo iskaashiga caalamiga ah” wuxuu ka koobnaa 15-hoosaad oo leh 395 cinwaan. Mawduuca isku xiga ee 2004 wuxuu ahaa “Horumarinta, Isdhaxgalka, Dhaqanka iyo Casriga”. Sannadkii 2008 maalintii saddexaad ee daraasadda Viet Nam waxaa jiray laba qodob oo dhexe "Is dhexgalka iyo Horumarka". Intaa ka dib sanadkii 2012 laba qodob oo udub dhexaad ah ayaa wali jiray laakiin horumaray xaqiijinta cusub ee Sustainability.
Maalinta shanaad ee daraasadaha Vietnam Nam oo ay ku taal Jaamacadda Qaranka ee Hanoi kor u qaaday calanka Daraasadaha Vietnam Nam. Waxay u shaqeysay sidii kafaala-qaade ruuxi ah si ay ula xiriirto qaar ka mid ah ururada tacliinta sida Akadeemiyada Cilmiga Bulshada ee Fiyatnaamiis, Akadeemiyada Fiyetnaam iyo Sayniska iyo Teknolojiyada, Ho Chi Minh City University, Wasaaradda Waxbarashada iyo Tababbarka, Wasaaradda Sayniska iyo Teknolojiyada Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Wasaaradda Dhaqanka, Isboortiga iyo Dalxiiska, Wasaaradda Warshadaha iyo Ganacsiga, Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga, Wasaaradda Beeraha iyo Horumarinta Reer Miyiga, Wasaaradda Shaqada, Invalids War iyo daryeelka bulshada, Wasaaradda Kheyraadka iyo Deegaanka. Waxay u muuqataa in dhammaan "biyuhu waxay galaan godad".
Mawduuca loogu talagalay barta udub-dhexaadka ah “Horumarka waarta ee laga helo xaaladda isbedelka adduunka”. Waxaa lagu abaabulay gudaha 12, 2016. Halkan daraasadaha Vietnam Nam waxaa lagu aqoonsaday dhinacyo badan: dhaqanka, siyaasada, bulshada iyo guddi hoosaadyo badan oo leh qodobo badan oo udub dhexaad ah ayaa la sameeyay: Arimaha Dibada, Wadashaqeynta, Isdhaxgalka Caalamiga (Guddi hoosaadka 1), Dhaqanka Dhaqanka (Guddi hoosaad 2), Waxbarshada iyo hormarinta Awoodaha awood leh (Guddi hoosaad 3), Bixinta Waxgaradka iyo Teknolojiyada (Guddi hoosaadka 4), Dhaqaalaha iyo Macnayaasha Taageerada (Guddi hoosaad 5 ), Bedelka Cimilada (Guddi hoosaadka 6).
Jaantus 1: Aqoon-isweydaarsiga cilmiga ah ee ku saabsan daraasadaha Vietnam sanadka 2016 (isha: vnu.edu.vn)
Sidaas awgeed, Daraasadaha Vietnam Nam Wuxuu koray wuxuuna daboolay dhibaatooyinka muujinaya in dadka reer Fiyatnaamiis ay ku soo dhacayaan isha dadka kale ee ku dhow, gaar ahaan dadka wadammada waaweyn, “gawraca"Ama"dhaafayaa ”. Taasi waxay umuuqatay inay ku xirnaato Vietnam iyadoo loo sii marayo “jacaylka taariikhdaHadiyadeeduna waxay ahayd jacaylkii "Bir iyo walxaha qarxa"?
2.4 Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Fiyatnaam - Nidaamka qiimaha cilmiga deegaanka ee cilmiga aadanaha.
Dadka Fiyatnaamiis way isku dayi karaan inay wax weydiiyaan. Ayaa cadowgeedu ahaa? Tani waxay ahayd mala yaab leh oo si fiican u yaqaan si ay u noqdaan aadanaha aan kor ku soo sheegnay fikirka taas oo ixtiraamaysa Fiyatnaam - dalka quduuska ah iyo nidaam qiimaynta cilmiga deegaanka ee cilmiga aadanaha.
2.5 Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Fiitnaam - Teknolojiyada iyo Isbedelka Cimilada
In 5th Kongareeska barashada cilmiga Vietnam Nam, Fiyatnaam waxay awood u leedahay inay iskeed isu taageerto, sidaa daraadeed waxay geli kartaa meelaha qaar oo loo habeeyay xaqiijinta dhaqameed sida cilmiga bulshada iyo bini aadamka si loo furo albaabka gaarsiinta caqliga ama waji cusub oo ah "Teknolojiyada iyo isbedelka cimilada".
Isbedelka cimilada ma aha oo kaliya in nolosha dadka reer Vietnam ay noqoto mid xasilloon, laakiin sidoo kale waxay sababi kartaa in aadanaha oo dhan ay istaagaan qarka u saaran baabi'inta Fiyatnaam waxay u egtahay laxanka wadnaha wadnaha aadanaha.
2.6 Daraasadaha Vietnam - Shaqada Pratical
Su'aal ayaa la soo saaray sidii fikir ficil ah oo loogu talagalay daraasadaha Vietnam Nam. "Xagee ayaa warshadahaan laga adeegsadaa?" iyo Maxaa loogu talagalay? Mise waa la jahwareeray?
Waxaa jiray barnaamij ku saabsan “Dhalasho jilicsan”. Shimbiraha Vietnam waxay ku dhacdaa tuubbo qashin ah sida tuubada biyaha halka dadka kale ay u abuureen. Waxay iska leedahay hanti caqliyeed.
Jaantus 2: Flappy Bird - Nguyen Ha Dong 2014 (isha: kenh14.vn)
Shimbiraha ayaa isla markiiba dhintay. In kasta oo ay ku nooleyd xushmadda adduunka sida haddii ay tahay Phoenix. Baaraha cilmi-baarista Vietnam Nam ayaa soo saaray su’aal: Maxaa loogu badalay tuubadaas a “Adkaynta laanta dameerada” baadiyaha Vietnam?
2.7 Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Fiitnaam - Maandooriyaha Lotus pistil
Waa maxay sababta Daraasadaha Vietnam Nam? Su'aashu waxay ka dhigeysaa cilmi baareyaasha daraasadaha Vietnam Nam inay leeyihiin jawaab kaladuwan. Markuu Madaxweynaha Barack Obama ee Mareykanka booqday Ngoc Hoang Pagoda inta lagu gudajiray booqashadiisa Vietnam Nam 24/05/2016, waxaa jiray su’aalo badan oo cilmibaareyaal fara badan ka soo qaateen daraasadaha Vietnam Nam. Maxaa sameeyay Ngoc Hoang Pagoda leeyihiin? Oo muxuu u ahaa sababtaas? Ma saxbaa in Obama oo leh xaalad madoow uu halkaas u tegey si uu u tukado ilmo, a wiil ama gabar, hadiyad ahaan u ah waqtigiisa howlgabnimada "Wadankiisii ​​hooyo."
Jaantus 3: Obama wuxuu booqday Ngoc Hoang Pagoda (isha: giacngo.vn)
Warshadaha Daraasadaha Vietnam Nam ka Jaamacadda California Berkeley, Mareykanka ee Mareykanka (fiiri sawirka) wuxuu adeegsaday dukumiintiyada daraasadaha Vietnam Nam. Waqtigaas Professor Peter Zinoman (fiiri sawirka), cilmi baadhayaasha daraasadaha Vietnam Nam ayaa u diyaariyay cutubyo ka mid ah isaga.
Jaantus 4: Jaamacadda California ee Berkeley (isha: scholarship.net)
Jaantus 4: Peter Zinoman (isha: nhipcaudautu.net)
Tani waa sadarka labo muusik Van Cao iyo Wiilka Trinh Cong. Wuxuu sidoo kale qorsheeyay booqasho Ngoc Hoang Pagoda.
Waxyaabaha oo dhami waxay ku dhegan yihiin “walaxda pistil lotus”Fiyatnaamiis.
"Walaxda Pistil"Waxaa loo qaadan karaa nooc walax ah"Lagu sameeyay Vietnam Nam"Si loo abuuro shabakad urur sida shabakada caaro ee barashada Vietnam Nam si loogu xiro Vietnam Nam xarumo waaweyn oo ka kala socda dalal badan iyo dhulal badan oo adduunka ah.
Jaantus 6: Trinh Cong Son iyo Van Cao (isha: petrotimes.vn)
Degelka: xikmad.com ayaa dhashay oo af ingiriisi waa Holylandvietnamstudies.com sidii inay rafcaan ka qaateen baarayaasha daraasadaha Vietnam Nam joogitaanka guriga.
Baarayaasha cilmiga Vietnam Nam fadlan soo dir maqaalladaada!
Nooca Fiyatnaamiis: Thánh địa Việt Nam hɔc - Vùng đất thánh
Views Views: 2,812
← Raadinta “VO COC”
La COCHINCHINE ama Nam Ky →